बारम्बार किन रिसाउँछन् देउवा ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
बारम्बार किन रिसाउँछन् देउवा ?
किन रिसाउँछ मान्छे ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा खरो प्रश्नको सामना गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता प्रश्न सुन्ने बित्तिकै उनी आक्रोशित हुन्छन् र जवाफ पनि त्यस्तै फर्काउँछन् । यो हामीले भनेको होइन । पछिल्ला केही वर्षयता उनका अभिव्यक्तिले त्यस्तै छनक दिन्छन् । विभिन्न अन्तर्वार्ताका क्रममा होस् या समारोहमा कसैले देउवालाई चित्त नबुझ्ने प्रश्न गर्यो कि आक्रोशित भैहाल्छन् ।
मंगलबार यस्तै भयो । कांग्रेस नेता अशोक कोइरालाको मृत्युपछि परिवारलाई समवेदना दिन विराटनगर पुगेका थिए देउवा । विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा कांग्रेस सरकारमा कहिले जान्छ ? अविश्वासको प्रस्ताव कहिले आउँछ ? कसले ल्याउने हो ? भन्ने प्रश्न गरे । त्यो प्रश्नमा उनले कांग्रेस विपक्षी दल भएको प्रष्ट पारे ।
यत्तिकैमा अर्का पत्रकारले अब कांग्रेसले केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्न खोजेको हो ? भन्ने प्रश्न गरे । यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै देउवा आक्रोशित हुँदै भने, ‘कांग्रेस विपक्षी पार्टी भनेको सुन्नुभएन, विपक्षी पार्टी विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी जानुस् ।’
बैठकका लागि नेताहरू पार्टी कार्यालयतर्फ जाँदै थिए । सबै नेताले विद्यार्थीका भनाई सुन्दै भित्र छिर्दै थिए । तर, देउवालाई भने विद्यार्थीहरूले भित्र छिर्न दिएनन् । त्यसपछि देउवा आक्रोशित हुँदै बाटो खाली गर्न चेतावनी दिँदै विद्यार्थीलाई झपारेका थिए ।
यो घटनाले देउवाले केही वर्ष अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको जवाफको रवाफलाई सम्झाइदियो । देउवा आक्रोशित बनेको त्यो कार्यक्रम थियो– ‘साझा सवाल ।’ बीबीसीबाट प्रसारित सो कार्यक्रममा एक सहभागीेले सोधेको प्रश्नमा देउवा आक्रोशित बन्दै ‘तपाईं बढ्ता नबोल्नुस्, चुप लाग्नुस,’ भनेका थिए । ती व्यक्तिले तपाईं ४/५ पटक प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री मात्र होइन, जनताका लागि प्रधानमन्त्री कहिले बन्ने ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । यसमा शेरबहादुर देउवाले, ‘तपाईंले चाहेको हुनुपर्छ भन्ने छैन, मलाई जनताले चुनेका हुन्, जनताले चुनेको मान्छे प्रधानमन्त्री नभएर के तपाईं हुने त । यहाँ निहुँ खोज्ने कुरा भैरहेको मैले बुझेको छैन र ?’ भन्दै आक्रोशित बनेका थिए ।
देउवा जंगिएका घटना यतिमा मात्र सीमित छैन । कुरा २०७५ साल फागुन तिरको हो । त्यतिबेला गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए । त्यहीबेला पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा एक पत्रकारले गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनबारे कांग्रेस किन मौन ? प्रश्न गरे । यो प्रश्न सुन्नासाथ देउवा एकाएक रिसाएर ‘के बोल्नुपर्ने हो मैले ?’ भने । यसैमा पत्रकारले पुनः प्रश्न गरे, ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा गोविन्द केसीलाई साथ दिनुभएको थियो । अहिले सयौं विद्यार्थी आन्दोलन गरिरहेका छन् । किन बोल्नु भएन’ भनेर सोधको ? यो प्रश्नमा देउवाको पारो चढिसकेको थियो । उनी आक्रोशित हुँदै भने, ‘तपाईं कुरा सुन्नु हुन्न कि क्या हो ।’
नेताहरू परिस्थितिअनुसार अलिकति रिसाइदिने, झर्किदिने गर्छन् । त्यसैले उनीहरू आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि त्यस्ता टुल्सको प्रयोग गर्छन् । एउटा प्रश्नमा एकपटक झर्किदिएपछि अर्कोले प्रश्न नगर्ने र असहज सिर्जना नहुने भन्ने ठानेर बनाइएको यो राजनीतिक रणनीति हो ।
गत वर्ष नेपाल विद्यार्थी संघमा नैनसिंह महरको कार्यसमिति विघटन भएपछि देउवाले संघको जिम्मेवारी राजीव ढुंगानालाई दिने तयारी गरेका थिए । त्यतिबेला उमेर हद ३२ वर्ष लागू नगरी तदर्थ समिति बनाएको भन्दै अर्को पक्षका विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए । त्यसैका लागि पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी गर्यो ।
बैठकका लागि नेताहरू पार्टी कार्यालयतर्फ जाँदै थिए । सबै नेताले विद्यार्थीका भनाई सुन्दै भित्र छिर्दै थिए । तर, देउवालाई भने विद्यार्थीहरूले भित्र छिर्न दिएनन् । त्यसपछि देउवा आक्रोशित हुँदै बाटो खाली गर्न चेतावनी दिँदै विद्यार्थीलाई झपारेका थिए । यी घटनाले पनि देउवा प्रश्न सुन्ने बित्तिकै किन रिसाउँछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आखिर किन रिसाउँछन् उनी ?
के यो मानवीय स्वभाव हो ? अथवा यसको कारक अरु कुनै हुन सक्छन् ? कसैले नराम्रो भन्ने वित्तिकै अथवा त्यस्तै प्रकृतिको प्रश्न आउने बित्तिकै मान्छे किन आक्रोशित हुन्छ ?
यो राजनीतिक रणनीति हो
मान्छे अलिअलि रिसाउनु, अलिअलि झर्किनु, अलिअलि आफ्नो पारा देखाउनु स्वभाविक हो । तर, त्यो रिसले उसको दैनिक जीवनमा अप्ठेरो पार्न थाल्यो, व्यावहारिक रूपमा समस्या आउन थाल्यो र अन्तरव्यक्तित्वका सम्बन्धमा पनि असहज हुन थाल्यो भने गम्भीर समस्याको रूप देखा पर्न थाल्छ । नेताहरू परिस्थितिअनुसार अलिकति रिसाइदिने, झर्किदिने गर्छन् । त्यसैले उनीहरू आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि त्यस्ता टुल्सको प्रयोग गर्छन् । एउटा प्रश्नमा एकपटक झर्किदिएपछि अर्कोले प्रश्न नगर्ने र असहज सिर्जना नहुने भन्ने ठानेर बनाइएको यो राजनीतिक रणनीति हो ।
राजनीतिक मनोविज्ञानले पनि के भन्छ भने आफूले नचाहेको वा मिलाउन नसकेको अवस्थामा अलिकति रिस देखाइदिएपछि त्यो अवस्था आफैं टरेर जान्छ । अथवा, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुराबाट राजनीतिज्ञहरू प्रेरित भएका हुन्छन् । त्यही प्रेरणाको स्वरूप छिटो केस सल्टाउन वा पत्रकारले धेरै प्रश्न नसोधोस् वा धेरै प्रेसर नदेओस् भनेर पनि अपनाइएको यो एउटा गतिलो रणनीति हो । त्यति रिसाएपछि उहाँको समस्या टर्‍यो । त्यो चाहिँ उहाँको रिस होइन, यो तात्पर्यता हो । किनभने पत्रकारलाई पनि अहिले कांग्रेस कुन अवस्थामा छ, थाहा छ । उहाँले पार्टीभित्र सबै पक्षलाई मिलाउन नसक्नु भएको पनि थाहा छ । यी सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि पत्रकारले किन मलाई पेलेको होला भन्ने सोच्नुभयो । त्यसपछि रिसाइ दिनुभयो । यो सामान्य हो ।
किन रिसाउँछन् मान्छे ?
डा.पुष्पप्रसाद शर्मा, मनोेचिकित्सक
मान्छे रिसाउने कारण एउटा मात्र हुँदैन । यो मान्छेको अन्तरनिहित स्वभाव हो । दुःखी हुनु, खुशी हुनु, डराउनु अथवा रिसाउनु व्यक्तिको अन्तरनिहित गुण हो । तर, कुनै मान्छे कुनबेला कति रिसाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । जीवनपद्धत्ति र अन्तरसम्बन्धमा रिसले कत्तिको प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा मूख्य हुन्छ ।
कतिपय मानिसहरू नकारात्मक कुरा सुन्ने बित्तिकै अथवा कुनै प्रश्न सुन्ने बित्तिकै रिसाइहाल्छन् । यो पनि कुनै मानसिक रोगको लक्षण भने हुन सक्छ । तर, के कुराबाट रिसाएको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।
कतिपय मानिसहरू भने बिना कारण रिसाइरहेका हुन्छन् । यो नकारात्मक इमोसन हो । यो धेरै भयो भने यसले मानसिक, शारीरिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । साथै, उसको दैनिक क्रियाकलाप र व्यक्तित्व विकासमा पनि निकै असर गरिरहेको हुन्छ ।
यदि कुनै मानिसलाई मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ भने ऊ बढी रिसाउन थाल्छ । त्यसैले रिसलाई एउटा मानसिक समस्याको लक्षणको रूपमा लिइन्छ । कम रिसाउने मानिस बिनाकारण अनायसै रिसाउन थाल्यो भने उसमा केही मानसिक समस्या छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यदि रिस बढ्दै गयो भने त्यो दुर्घटनामा परिणत हुन पनि सक्छ । त्यसैले रिसलाई एउटै समस्याबाट हेर्नु हुँदैन । कसैको नानीदेखि रिसाउने बानी हुन्छ ।
तर, कतिपय मानिसहरू नकारात्मक कुरा सुन्ने बित्तिकै अथवा कुनै प्रश्न सुन्ने बित्तिकै रिसाइहाल्छन् । यो पनि कुनै मानसिक रोगको लक्षण भने हुन सक्छ । तर, के कुराबाट रिसाएको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।
ＮＰＯ法人日本ポーカー協会とは、日本での健全なポーカーの普及を目指して設立された、内閣府認証の非営利団体です。ポーカー事業の健全な運営をサポートし多くの日本のポーカープレイヤーの海外での活躍を応援しています。 もしあなたの答えが「全部であるし、どれでもない」なら勘が鋭い。特定のスタイルでばかりプレイしていると読まれやすくなるため、「ギアを変える」、つまりスタイルを変化させていく能力がポーカー テーブルでは非常に有用になります。ポーカーを始めたばかりの頃は「タイトアグレッシブ」に専念してみることをお勧めします。 ドローポーカーのかんたんバージョンを紹介（しょうかい）します。 https://kisstok.com/community/profile/fhlmarta7690658/ せっかくブラックジャックになったものの、ディーラーもブラックジャックでは引き分けとなり、配当は0です。 ブラックジャック⋅ 本来であれば、勝った場合は賭け金と同額の配当(1 to 1)を受け取る仕組みになりますが、ブラックジャックという役が成立した場合は、ディーラーが同様にブラックジャックだった場合を除いてその時点で勝ちとなり、賭け金の1.5倍の配当を受け取ることが出来ます。 ラスベガスの代表的なカジノゲームはブラックジャックやルーレット、バカラ、スロットなどがあります。 ブラックジャックでも、バカラでも100回近いゲームが可能です。 ブラックジャックでは、他のカジノハウスでは見られないルールもあります。
A copy of the MVR(s) obtained in response to the inquiry must be placed in the driver qualification file within 30 days of the date the driver's employment begins and be retained in compliance with 49 CFR 391.51. If no MVR is received from the State required to submit this response, the motor carrier must documentagood faith effort to obtain such information, and certify that no record exists for that driver. The inquiry to the State driver licensing agency or agencies must be made in the form and manner each agency prescribes. See example Inquiry to State Agencies form. You will need your Driver's License to complete this page. Before you can obtain an original CDL, you must qualify for the license based on your driving record. Any of the following will disqualify you from obtainingaCDL: https://sakwora.com/index.php/forum/profile/shellydeal00217/ Though we offerasuperior product to our competitors, we know that keeping our prices in line with them is important. In addition to keeping our prices low, we offer flexible payment plans and discounts for repeat customers and service members. This page will explain our low prices and your options for paying for your programs. Read and study the State of Connecticut DriverвЂ™s Manual located on our Adult and Teen Service pages. Not sure where to start? Try our Frequently Asked Questions page for some helpful hints. вЂњBy far the best driving school in New York City. Being conveniently located near Brooklyn College, where I attend, the overall environment was very roomy, clean, and organized.вЂќ South Bay Driving School has been teaching adults to drive for over 30 years. Our instructors are friendly, experienced and know the most up-to-date methods of driving and safety techniques.